Darpan Nepal – कोही मानिस अचानक बेहोस भए तुरुन्त यसो गर्नुहोस्
मानिस जहाँ र जहिले पनि बेहोस हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा छेउमै भएका मानिस पनि बढी आत्तिने गर्छन् । तर, यस्तो आवस्थामा बिरामीलाई लाइभ सपोर्टको आवश्यकता पर्छ ।
जसका लागि नजिकै भएको मानिसको ठूलो भूमिका हुन्छ । उसैको हातमा हुन्छ– कसैको अमूल्य जीवन बचाउने वा नबचाउने निर्णय । बेहोस भएको अवस्थामा गर्ने मद्दतबारे मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलले बताएका छन् :–
डा. ओममूर्ति अनिल, मुटुरोग विशेषज्ञ, ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल
बेहोसीका ३ कारण विशेषगरी मानिस तीन कारणले बेहोस हुने गर्छन् ।
पहिलो हो, मस्तिष्कका कारण । मस्तिष्कमा इपिलेप्सी हुँदा, ट्युमरलगायतको कारणले बोहोस हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मानिस बेहोस भए पनि रक्तसञ्चार चाहिँ हुन्छ ।
किनकि त्यतिवेला मुटुले काम गरिरहेको हुन्छ । यसरी बेहोस भएको मानिसको हात–खुट्टा चल्ने, जिउ तन्किने, मुखमा फिज आउने, मुखबाट फिज आउनेलगायत हुन्छ । यसरी बोहोस भएका मानिसको नाडी र पल्स पनि चलेको हुन्छ ।
अर्कोचाहिँ मुटुको कारणले बेहोस हुन्छन् । जसलाई कार्डियो सिङ्कोप पनि भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा मानिसको रक्तसञ्चार नै रोकिन्छ । किनभने, मानिसमा रक्तचापको यतिसम्म हुनुपर्छ, जसले मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार गर्न सकोस् । यस्तो अवस्थामा मस्तिष्कमा रगत पुगेको हुँदैन । प्रायः उभिइरहेको अवस्थामा यस्तो समस्या हुन्छ, सुतिरहेको मानिसमा भने निकै कम हुन्छ ।
अचानकमुटुको चाल बन्द भएर यस्तो समस्या हुन्छ । अनि केही सेकेन्ड वा मिनेटमै उसको श्वासप्रश्वास बन्द हुन्छ । अनि रक्तसञ्चार पनि हुँदैन । यस्ता मानिसको समयमै उपचार भएन भने मृत्युसमेत हुन सक्छ ।
बेहोसीको अर्को कारण पनि हुन्छ । मस्तिष्कमा अक्सिजनकोे कमी, गर्मी, बढी पसिना, उच्च रक्तचापको औषधी अत्याधिक सेवनलगायतका कारणले बेहोसीको समस्या हुन्छ ।
यस्तो समस्या त्यति खतरा हुँदैन । केही समयपछि आफैँ होसमा आउने गर्छन् । रातको समय ट्वाइलेट गएको अवस्थामा, गाडीमा वा हिँड्दाहिँड्दै यस्तो समस्या निम्तिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा लाइभ सपोर्टको जरुरत पर्छ । यसरी बेहोस भएका मानिसलाई राम्रोसँग लाइभ सापोर्ट नगरेको आवस्थामा मृत्युसमेत हुने सम्भावना हुन्छ ।
बेहोस भएका मानिसलाई रिकभरी पोजिसनमा राख्न जरुरी हुन्छ । जसका लागि पहिला बेहोस भएको मानिसलाई देब्रे कोल्टो पारेर सुताउनुपर्छ । र, देब्रे खुट्टालाई सीधा पारी दाहिनेलाई खुम्च्याइदिनुपर्छ । त्यस्तै, देब्रे हातलाई खुम्च्याउनुपर्छ र दाहिनेलाई चिउँडोको तल राख्नुपर्छ । यदि छारे रोगजस्तो समस्याका कारण बेहोस भएको अवस्थामा जिब्रो काटिएर फोक्सोमा रगत पुगी मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्ने भएकाले यस्तो गर्नुपर्छ । रिकभरी पोजिसनमा नराखेको खण्डमा श्वास रोकिएर मानिसको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । बेहोस भएको खण्डमा कहिल्यै पनि नाक थुन्ने, पानी खुवाउन खोज्नेलगायतको गतिविधि गर्नु हुँदैन ।
धेरै मनिस ब्लडप्रेसर न्यून भएर बेहोस हुने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा नाडी कमजोर हुने, बिरामीको अनुहारको रङ उड्दै जानेलगायतका समस्या हुन सक्छ । पहिला मानिसको खुट्टा उचालिदिनुपर्छ र सिरानी झिकिदिनुपर्छ । ताकि खुट्टातिरबाट रगत मस्तिष्कमा पुगोस् । यस्तो अवस्थामा मानिसलाई बसाउने, केही कुरा खुवाउन खोज्ने, दाँत उप्काउनेलगायतका गल्ती गर्नुहुँदैन । र, रोगी होसमा आउनेबित्तिकै नुनिलो र झोलिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ ।
कार्डियो क्यारेस्टका कारण बोहेस भई विश्वमा धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । यसरी बेहोस भएका मानिसलाई लाइभ सपोर्ट नगरेको अवस्थामा तत्काल मृत्यु हुन सक्छ । त्यसैले सिपिआरबारे जान्न जरुरी हुन्छ । सिपिआर गर्दा पहिला बिरामीलाई भुइँमा सुताउनुपर्छ । र, एउटा हातमाथि अर्को हात राखी औँला छिराएर हत्केलाले छातीको बीच भागमा थिच्नुपर्छ ।
प्रतिमिनेट सयदेखि एक सय २० पटक दुई इन्च तलसम्म थिच्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा श्वासप्रश्वासबारे पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसपश्चात् एक सेकेन्डभित्रै नाक बन्द गरेर मुखबाट कृत्रिम श्वास दिनुपर्छ । यस्तो श्वास दिँदा छाती माथि उठेको देखिनुपर्छ । यसो र्गयो भने मानिसको बाँच्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।
र, यो पनि मानिस कसरी वा किन बेहोस भएको हो भन्ने कुराको पनि जानकारी पाउन जरुरी हुन्छ । आँखाको अस्वाभाविक चाल, हातखुट्टा चलिरहेको छ र रक्तसञ्चार पनि छ भने छारेरोगको कारणले बेहोस भएको बुझ्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजाने, घाँटीमा केही बेरिएको भए निकालिदिने गर्नुपर्छ । मानिसको बेहोसीको कारण थाहा पाउन एबिसीबारे जान्नुपर्छ ।
श्वासमार्ग आर्थात् घाँटीमा अवरोध भएरनभएको, ब्लिडिङ र ब्लड सर्कुलेसन र सिम्पल फेन्टिङ एट्याक अर्थात् सामान्य तरिकाले बेहोस भएको अवस्थामा फ्यान चलाइदिने, पानीले अनुहार पुछिदिनेलगायतका गतिविधि गर्नुपर्छ । हृदयाघातका कारण भएको हो भने सिपिआर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
Previous Postभाग्य कसले देखेको हुन्छ र कतै तपाईंको भाग्यमा पनि राजयोग पो छ कि?? जान्नुहोस राजयोग हुनेले गर्नै पर्ने कुराहरु Next Postआठ सय बढी परिवार दूषित पानीको प्रयोग गर्दै